Ny Semalt dia manambara ny fomba ifandraisan'ny CTR amin'ny pejin'ny pejin'ny tranonkala
Ny tsirairay izay maniry ny hamboly amin'ny varotra an-tserasera dia mety hanontany tena ny vokatry ny organikapifidianana (CTR). Raha toa ny mpivarotra sy ny olona manao fandalinana mandroso, miezaha hanaraka ny mpifaninana aminao amin'ny manarakaSEO fironana. Na dia izany aza dia mbola tsy fantatra ny patanty Google sy ny fifaninanana mifandimby raha vao tsy mamoaka ny fepetran'ny algorithmampahibemaso - traveling through south america. Saingy ny zavatra fantatsika dia azo antoka fa ny CTR dia misy fiantraikany amin'ny laharam-pahamehana.
Na izany aza, ny fironana eo amin'ny varotra an-tserasera dia mitondra sary hafa. Ohatra, ny CTR dia mifehyFandrafetana Google. Maro ireo mpizara dizitaly no miezaka ny manao ny ankamaroan'io sehatra io. Anatin'ity lahatsoratra ity, Jason Adler, ny Success CustomerMpitantana Semalt dia maneho fahasamihafana maromaro eo amin'ny CTR sy ny lisitra, manazava ny fomba amam-panao azy ireo. Misy ihany koa toro-hevitra tena ilaina izay hanampy anaoNy tanjom-peo Google click-through (CTR) dia mahomby tsara amin'ny SERPs organika.
Ny fiantraikan'ny CTR
Mametraka ny tranonkala amim-pahombiazana, tokony misy fepetra ahafahana mametraka tranokala aofilaminana. Noho izany, Google dia mampiasa fampahalalana tahaka ny angona angona. Ny CTR dia misy fiantraikany amin'ny taham-pidin'ny SERP. Noho izany, tranonkala miaraka amin'ny lehibe indrindraMihidy eo amin'ny ambony ny isan'ny klika, fa ireo izay misy clic-vitsivitsy dia napetraka eo ambany. Ny algorithm dia natao hijerena ny votoatinymiaraka aminà klika manan-danja maro..Ny ankamaroan'ny fikarohana dia mampihatra ireo fepetra ireo amin'ny algorithms fitadiavana. Manoro hevitra ny mpamaham-bolongana i Googlemba ho manan-danja amin'ny lanjan'ny votoaty. Raha toa ka mihetsika tsy tapaka ny votoatin-javatra, dia tsindrio ny click. Ireo klika ireo dia mahatonga ny vohikala hahazo valisoa ho an'ny tsara indrindraManamafy ny vokatra SEO.
Faharoa, miankina amin'ny CTR ny Google ho ny fepetra fampisehoana OneBox. ANy tranokalan'ny tranonkala dia tsy maintsy manana CTR farafahakeliny mba hahazoana OneBox ao amin'ny tranonkalany. Google dia manana rafitra mandeha miavaka izay mandinika ny sanda amin'ny klioba(CTR) isaky ny fanolorana OneBox isaky ny fangatahana. Ity trangan-javatra ity dia mety manazava ny sasantsasany amin'ireo vanim-potoana ara-potoana eo amin'ny sokajy manokanatranokala na pejy. Ohatra, ny pejin-tranonkala iray dia afaka manatanteraka tsara amin'izao fotoana izao fa tsy ny fahombiazan'ny rahampitso. Vokatr'izany, mpivarotra dizitalydia tokony hampiasaina ny maha-zava-dehibe azy. Ny fikojakojana ny CTR dia afaka mitazona tsara ny tranokalan'ny mpikaroka ao amin'ny tranokala.
Ny tranonkala dia tokony hanana fahamendrehana mendrika amin'ny tahan'ny. Sarotra ny fanangonana sehatraho an'ny fampahalalana izay mitaky ny fisainana. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa ny olona izay manindry ny rohy mankany amin'ny tranonkalanao dia miara-miasa aminyfotoana lehibe. Ny CTR dia manatsara ny fahefanao amin'ny alàlan'ny siansa, izay manatsara ny isa misy anao. Ho an'ny CTR dia manana tombony be indrindraavy amin'ny SEO, mila mandamina ny votoatin'ny vohikala tsara amin'ny lohateny sy meta tags. Google dia manangona vohikala amin'ny maha-zava-dehibe ny anaoafa-po. Ny votoaty lehibe dia manana tsindry ambony amin'ny alalan'ny tahan'ny. Ny algorithm Google dia mampiasa io endri-javatra io mba hanavahana ny toerana misy azy manokanaNy toerana dia mendrika.
Ny mpirotsaka an-tserasera dia mety hifanakalozam-po amin'ny adihevitra momba ny fiantraikan'ny Google CTRny valin'ny fikarohana na tsia. Ny marina dia ny CTR dia tena manampy ny tranonkala ho laharam-pahamehana kokoa. Na izany aza, mety sarotra ny mahatakatra ny fifandraisanaeo anelanelan'ny CTR sy SEO. Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'ny roa tonta sy ny fombaAzonao atao ny manao ny sori-dalanao amin'ny Google click-through (CTR) hanatanteraka tsara ny SERPs organiques.